Tilmaama Pirimeerliigii: Laawuroo fi aktara fiilmii Wiil Ferel - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama Pirimeerliigii: Laawuroo fi aktara fiilmii Wiil Ferel
Pirimeerliigiin Sanbata Duraa sa'aatii laaqanaatti, tapha eegamaa tapha Landan guddaa walmorkatan, Arsenaal fi Tootanhaam gidduutti taasifamuun as eegala, garuu eenyutu Istaadiyemii Eemireetitti irra aana laata?
Xiinxalaan BBC Laawroo akkas jedha: ''waggoota muraasa dura osoo ta'ee tapha hunda Arsenaaltu moo'a jedheen tilmaama ture, amma garuu guyyoonni sunneen darbaniiru.''
''Amma, Tootanhaam taphattoota qabuun Arsenaalirra garee fooyya'aadha.''
Laawuroon 1-1 wal-qixa ba'u jedha, waliigaltuu?
Laawuroon aaktarii fiilmii koomeedii Ameerikaa Wiil Feerel waliin tilmaamaaf morkateera.
Arseenaal fi Tootanhaam (8:30 guyyaa)
Gareen lamaanuu qabxii akka wal gachisiisan yaada qaba, lamaanuu qabxii tokkoon ni gammadu.
Arsan Veengar Maanchistar Siitiin yoo moo'aman, murteen dabarfamaa ture itti hin tolle, ta'us garuu Siitiin injifachuu qaba ture.
Tootanhaam ammoo Kiriistaal Paalaasiin injifachuun gara tapha iintarnaashinaalaatti deemani, haa ta'u malee hojii cimaa gaafateeni.
Torbee kana Haarii Keen, Deele Alii fi Haarii Wiinkis miidhamarraa bayyaannatanii waan deebi'aniif ni fooyya'u.
Boornimaz fi Haadersfiild
Boornimaz ni moo'an jedha. Tapha Niiwukaasil waliin taasisan irratti sochii agarsiisan hedduun ajaa'ibsiifadhe.
Boqonnaan dura hedduu hin gammachiisan ture, leenjisaan Eedii Hoow sana sirreessuun injifatani. Yoo firiimbaan xumuraa afuufamu injifannoon sun isaaniif maal akka ta'e ilaaluu dandeessa.
Injifannoo bara kana yeroo jalqabaaf 'zoonii gadi bu'uu' irraa isaan baase, kanaaf ofitti amanuun jalqabbii badaa booda dhufe kun baay'ee ol ka'a.
Barnileey fi Siwaansii
Barnileey gubbaarra yoo taa'an, Siwaansiin ammoo 'gadi bu'uu' kan jedhu waan irratti barreeffame fakkata. Kun waan dafee jijjiiramuu danda'u ta'us dadhabbiin sarara fuulduraa irratti qaban rakkoo guddaa dha.
Barnileey irratti rakkoo uumu jedhee hin yaadu, kanaafuu cimina qaban irratti hundaa'uun, garee Diiyichis deeggariifan jira.
Kiriistaal Paalaas fi Eevartan
Yoo ga'msa qabaate, Ruuben Looftas Chiik tapha jalqabaa garee biyyaalessaa Iingilaand'f torbee darbe Jarmanii waliin taasiseen gahumsa guddaa agarsiiseen kan dinqaman namoonni hunduu, tapha Kiriistaaliif taasisu ilaaluuf hawwiin eegaa jiru.
Eevartaniitti yoo deebinu ammoo, yeroodhaaf garee kana kan qabate Deeviid Aanzwoorz ammallee itti gaafatamummaarra jiraachuunsaa na ajaa'ibsiisee jira. Boqonnaa darbe kanatti nama ta'e ni muudu jedhee yaadee waanan tureef.
Ammallee taphattootuma bara kana rakkachaa turantu garee kana guutee jira, gama biraan Paalaas ammas sadarkaa dhumaarra jiranus Haadsan erga muudamanii fooyyii cimaa keessa jiru.
Leestar fi Maanchistar Siitii
Maanchistar Siitiin taphoota 10 walitti aanan injifachuu dadhabuu laata? Anaan natti hin mullatu.
Leenjisaan Leestar Kilaawudee Piiwul akkamiin tapha kanaaf dhiyaatu kan jedhu ilaaluun namatti tola, akkasumas Vaardii qofaa isaa fuuldurarra taasisuun sarara gidduu Siitii ni morkatuu laata kan jedhus waan hawwiin eegamu dha.
Garuu tapha kanarraa Leestar waa ni argatu taanaan, akka 'boonasiittan' ilaala, akkuma garee kaan yeroo ammaa Siitii waliin taphataniitti.
Liivarpuul fi Saawuzihaapitan
Xiyyeeffannoon guddaan Saawuzihaampitan irraa Liivarpuulitti hin gurguramu kan jedhame Virjiil vaan Diiyik irratti ta'a, akkamittiin Aanfiilditti taphata kan jedhu ilaaluuf.
Hanga taphichi deemuun Liivarpuul ni injifata'n jedha.
Saadiyoo Maanee hiriiruu baatullee, Liivarpuul Saawuzihaapitanirra caalmaa qabaachuu qaba.
Weesti Biroom fi Cheelsii
Cheelsiin Maanchistar Yunaayitidiin yoo injifatan ammas sararri fuulduraa isaanii cimaa ta'e agarsiisuu danda'anii jiru, kanaaf leenjisaan Weest Biroom Toonii Puuliis gareen isaanii galchii lakkoofsisuuf wayita rakkachaa jiru kanatti tapha barbaadan miti.
Puuliis Hagayya darbee kasee hin injifanne, torbee kanattis kun ni jijjiirama jedhee hin yaadu.
Maanchistar Yunaayitid fi Niiwukaasil (1:30 galagala)
Haala Raafaa'eel Beeniteez Niiwuukaasiliin ittiin taphachiisan nan jaaladha, haa ta'u malee taphataa cimaa gidduurraa akka hin qabne beekamaa dha.
Gama biraatiin, Niiwukaasil gurmaa'uu ni danda'u, garuu Yunaayitid cabsanii seenuuf hagam itti fudhata kan jedhu gaaffii dha.
Benitez's side will make it difficult but there is only one outcome.
Gareen Beeniteez cimuu danda'u garuu, qabxiin argamu tokko qofa (injifannoo Yunaayitid).
Waatfoord fi Weest Haam (12:00 galagala)
Deeviid Mooyees tapha jalqabaa leenjisaa Weest Haam ta'uun taasisan ilaaluun waan namatti tolu dha.
Sochii cimaa ta'e warra 'burruusaa' irra nan arga jedheen eega, sababni isaas taphattoonni ija leenjisaa haaraa galuu waan barbaadaniif akkasumas Weest Haam sadarkaa xumuraarra warreen jiran keessa ta'anus, garee cimaa waan qabaniif.
Waatfoord bara kana taphoota dirree isaaniitti taasisan shan keessaa injifachuu kan danda'an tokko qofaadha, kanaafuu Viikaareej bakka itti cimanidha jedhee hin yaadu, akkasumas Weest Haam harka duwwaa deebi'u jedhees hin amanu.
Biraayitan fi Istook Siitii (04:00 halakan)
Biraayitan kanan eegeen caalaatti haala gaariin deemaa jiru, injifachuufis kan carraa qabu isaanuma.
Garuu Istookis garee salphaatti harka hin laanne ta'uu Leestar waliin boodaa ka'uun yeroo lama walqixa ta'anii xumuruun agarsiisanii jiru.
Istook ni injifatu jedheera. Biraayitaniin kabaja dhorkuu osoo hin taane, kun Priimeerliigii dha, garee moo'uun qaba jettee yaadduun moo'amuun waan jiruuf